Yaa Ugu Da’da Weyn Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaliya oo Noqon Doona Guddoon KMG inta mid rasmiya laga ...
Magaalada Muqdisho waxaa Maanta Lagu dhaarinayaan Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamanka Soomaliya ee dhawaan lagu doortay xarumaha Maamul Goboleedyada dalka ka jira.
Dhaarinta kadib waxaa loo baahnaan doonaan Guddoon KMG ah oo shir gudoominaya kulmada Baarlamanka Soomaliya inta laga soo dooranayo Gudoomiyaha Baarlamanka Federaalka Soomaliya iyo ku-xigeenadiisa.
Shaqsiyaadka ugu da’da weyn ee loo badinayo inay noqon doonaa Guddoomiyaha Baarlamaanka KMG ah ayaa ah saddex nin midkood.
Shasiga Labaad ee loo malaynayo in uu noqdo Guddoomiyaha KMG ah ayaa ah Shariif Sheekhuna Maye Taliyihii hore ee Ciidamada Booliska, kaasoo ka mid ahaa Xildhibaanadii lagu soo doortay Baydhabo ee Caasimada KMG ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaliya.
Baarlamaankii sanadkii 2012 ayaa ninka ugu da’da weynaa ee noqday Guddoonka KMG ayaa waxaa uu ahaa Jen. Muuse Xasan Cabdulle oo markii dambe loo magacaabay Safiirkii Talyaaniga u fadhiyay Soomaaliya.